Freddie Figgers: Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray | Biyoguurenews.com
Home Wararka Freddie Figgers: Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray
Freddie Figgers: Ninka milyaneerka ah ee yaraantiisa qashinka lagu dhex tuuray
Freddie Figgers waxaa markii ugu horreysay la siiyay koombiyuutar isaga oo 9 jir ah, wuxuu koombiyuutarkaas ahaa mid duqoobay oo aanan shaqaneynin balse wuxuu jeceyl u qabay in uu meel sare ka gaaro teknooloojiyadda.
Wuxuu markii dambi noqday qof wax curiya oo shaqo abuur sameeya iyo wuxuuna ka taajiray arrimaha teknolojiyadda. Ninkan wuxuu yarantiisa soo maray nolol adag.
“Weligaa daruuftaada yaysan ka turjumin wax aad tahay,” ayuu yiri Freddie Figgers.
Ninkan oo hadda 31 sano jir ah, markii uu 8 sano jirka ahaa, wuxuu noloshiisa ka wareysatay aabihii, gaar ahaan dhalashadiisa.
“Aabahay wuxuu igu yiri, ‘hooyadii ku dhashay wey ku tuurtay, aniga iyo Betty Mae ma aanan jecleyn in aan ku geyno xarumaha lagu daryeelo carruurta, balse waxaan go’aansanay in aan ku korsano, wiilkeyga ayaad tahay.”
Freddie ayaa la tuuray isago canug yar, waxaana lagu riday koonteenar qashinka lagu tuuro oo yaallay gobolka Florida ee Mareykanka.
“Aabahay ayaa igu yiri, ‘markaa waxaad ahayd sidii qashinka. Garabka ayuu i qabtay, wuxuu igu yiri ‘wiilkeyga i dhageyso, arrintaas waxbo u qaadanin”, ayuu yiri Freddie.
Aabihiisa, Nathan Figgers, wuxuu ahaa fuundi halka Mae Figgers ay aheyd beeraley. Waxay ku noolaayeen deegaan miyi ah oo oo ku yaalla waqooyiga gobolka Florida. Xilliggaas waxay ahaayeen 50 sano jirro, waxayna ahayd sannadkii 1989, oo ah xilligii uu Freddie dhashay.
Nathan Figgers, Freddie iyo Betty Mae (Midig)
Waxay labadooda soo korsadeen carruur badan balse qaateen Freddie oo labo maalmood kaliya ah jira, waxay usoo korsadeen sida canug ay dhaleen oo kale.
Freddie wuxuu sheegay in wax kasta ay siiyeen Nathan Figgers iyo Mae Figgers.
“Carruurta ayaa i waabsan jiray, waxay iigu yeeri jireen ‘canuggii la soo tuuray, wiilka qashinka, wax ku rabo ma laha, waxaad tahay wasakh’,” ayuu yiri Freddie.
Xitaa wuxuu sheegay in waaggii uu iskuulka dhiganayay ay carruurta inta ay qabteenn ay ka dibna ku rideen koonteenarada qashinka, isla markaana ay ku qosli jireen.
Freddie wuxuu sheegay in Nathan iyo Betty Mae in ay yihiin halyeeyo si weyn uu ugu deydo.
Betty Mae iyo Nathan Figgers
Maalmaha fasaxa waxay Freddie iyo Nathan gaari jireen goobaha qashinka lagu soo daadiyo – waxay ka raadsan jireen waxyaabaha la soo tuuray ee laga yaabo in ay isticmaali karaan, markii dambe Freddie ayaa qashinka ka dhex helay koombiyuutar.
“Waxaa jirtay mahmaah oraneysay, ‘qashinka uu soo tuuro qof, wuxuu hanti u yahay qof kale,” ayuu yiri Freddie.
Wuxuu ku howlanaa uruurinta qalab ay ka mid yihiin Raadiyaha iyo saacadaha, kuwaas oo ka caawiyay ninkii soo korsaday.
Wuxuu sheegay in markii 50 jeer uu isku dayay in uu shido kombiyuutarka uu markii dambe ku guuleystay. Tallaabadaas waxay u horseeday in noloshiisa uu ku qaato ka shaqeynta teknooloojiyadda.
Wuxuu sheegay in damaciisuu ahaa in uu meel ka gaaro cilmiga koombiyuutarada, xitaa wuxuu ka fakiri jiray in uu ku ciyaaro koombiyuutarkiisa marka uu iskuula jiro.
Freddie wuxuu ahaa 12 sano jir markii la ogadaay cilmigiisa. Wuxuu ku mashquulsanaan jiray hagaajinta koombiyuutarada hallaabay ee iskuulka, marka ay carruurta kale iska ciyaari jireen.
Agaasimihii qaabilsanaa waxbarashada iskuulada wuxuu ahaa duqa magaaladii ay degganaayeen ee Quincy, markii uu arkay in Freddie uu hagaajinayo koombiyuutarada, wuxuu ka codsaday in uu waaliddintiisa uu la yimaado hoolka maamulka dowladda hoose.
“Markii uu gaaray hoolka, wuxuu tusay 100 kombiyuutar, wuxuu ku yiri ‘in aad hagaajiso ayaan rabaa koombiyuutaradan.”
Freddie wuxuu maalin kasta hagaajin jiray koombiyuutarada halkii saac-ba wuxuu qaadan jiray $12 doolar.
Wuxuu sheegay in uu rabay lacag balse uu raadinayay fursad uu ku qabsado waxa uu jecelyahay.
Previous articleDeg Deg,Hadaanu Nahay Aqlabiyada Baarlamanka kasoo baxay beesha harto digniin ayaanu udiraya beesha dhexe
Next articleDacwad ka dhan ah Farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii QM ay xaqiijisay in askar Soomaali ah la geeyey Dagaalkii Tigray